Huobi keensataa shati sarrifka crypto Japanese BitTrade
Huobi Group waa in ay ballaariso adeegyada ganacsi oo ay Japan via heshiis dhaw si aad u iibsato sarrifka cryptocurrency shati degaanka BitTrade. BitTrade hadda waa mid ka mid ah 16 weydaarsiga shati ee Japan iyo sidoo kale xubin ka mid ah Virtual Association Lacagta Exchange Japan.
Sarkaal dhaqaale oo madax Huobi ee, Chris Lee, faallo afku: “Kabaallaynta on kooxda hoggaanka BitTrade iyo liisanka dawladda-ansixiyey Japanese, tani waa uun bilowga sida aynu eegno in ay koraan BitTrade galay ciyaaryahanka ugu badan ee suuqa cryptocurrency Japan.”
Shirkadaha crypto Major sameeyaan koox u ololeynta DC
Tiro ka mid ah lacagaha blockchain, is-weydaarsiga iyo GOORMUU qorsheeyaan si ay u qalqaaliyaan Washington, DC-dajiyayaasha la Blockchain Association cusub. Ururka cusub waxa ay diiradda saari lahaa ku saabsan waxbarashada iyo sharci labada isbedel oo qayb ka ah dadaal lagu doonayo in caadiga ah xiriirka ka dhaxeeya GOORMUU crypto iyo sharci-dajiyayaasha, doodidda xeer macquul ah. Coinbase, Circle, Digital Lacagta Group, Polychain Capital iyo Protocol Shaybaarka ka mid ah xubnaha aasaasay ururka ayaa.
Mid ka mid ah shaqaalaha marka hore ururka waa caawiye Senate hore iyo Overstock.com ololeeye blockchain magacaabay Kristin Smith. Waxay u sheegtay Post ay doonaynin “hanuuniyo” hay'adda sida uu bilaabanayo soo baxay, oo wuxuu ku yidhi, “Waxaan qarash waqti badan samaynaya badan oo shaqada waxbarashada aasaasiga ah in meel bannaan oo this … Waxaan ahay ku faraxsanahay in aan si gaar ah diiradda on arimahan.”
Report Kraken Daily Market for 11.09.2018
ka danbeeya $ 1.8M xatooyo cryptocurrency Dambiyada jeeda 10 sano
Caddaaladda ayaa ka adkaaday for dhibane u ahaa afduub iyo dhac, sidii ninkii ka dambeeyay $1.8 million xatooyo lacagta dalwaddii la filayaa in la xukumay 10 sano xabsi. Nasiib wanaag, dhibbanaha ugu danbeyn ka baxsaday afduubayaasha uu. dembiilaha oo, Louis Meza, da 35, waa dhab “saaxiibo” dhibbanaha oo gartay inuu lahaa xaddi weyn oo Ceter kaydiyaa uu jeebka at gurigiisa. Meza, iyo 3 ee jiilalka uu dhacay dhibbanaha.
Dambiilayaasha saaray Dhuunta ah madaxa dhibbanaha oo u haysteen muddo dhowr saacadood. Waxay ku qasbay in ay soo wareejiyaan furaha guriga uu sidoo kale uu “furayaasha crypto” (macluumaadka loo baahan yahay in ay helaan oo uu jeebka cryptocurrency.) dambiilayaashu ka dibna galay guriga dhibanaha oo xadday ul xasuusta in ku jira uu crypto ah. Nasiib darro, waayo hoodlums ah, waxay la qabtay on ilaalo video samaynaya dembi ah. Dhibbanaha wuxuu u suurtagashay in ay ka baxsadaan oo ay maamulaan si ay dukaan u dhow raashinka halkaas oo isna wuxuu u yeedhay 911. Xeer-ilaaliyaha Degmada Manhattan Cyrus Vance Jr. ayaa sheegay in “Louis Meza maleegtay ee qarniga 21aad ul-up. Markaas baarayaasha 21-qarnigii isaga gar darooday, xaqiijinta xukun durkin meel kobcin.Waxa sharciga ah.” Louis Meza ayaa sidoo kale lagu amray in ay lumiyo ~ $ 100,000 qiimaha calaamadihii cusbo & 84 bitcoins (~ $ 500,000). Dhamaadka, dhibbanaha si ammaan iska helay iyo cryptocurrency bogsaday.
Jeffrey Francis · SIBTEMBER 6, 2018
Post Previous:Blockchain News 11.09.2018